Beeraha Petunia guriga
Petunias - qurxinta quruxda badan oo qurux badan ee beerta, beerta ubaxa ama balakoonka. Daryeelka geedka this ma aha mid adag, taas oo macnaheedu yahay in xataa xitaa florist aan fiicnayn koraan karaa quruxda sida on goobta. Si aad u tagto petunias xagaaga oo dhan si ay u farxaan isha, waxaa lagama maarmaan ah in ay abuuraan si sax ah.
Waqtiga beerto petunias loogu talagalay geedo
Iyada oo ku xiran xaaladaha cimilada, waxaa lagula talinayaa in ay beeraan petunia laga bilaabo bartamihii Febraayo ilaa bartamihii Maarso. Taasi waa, haddii aad rabto in aad hesho warshad ubax ah horraantii Juun iyo ku noolaan gobolka halkaas oo ay diirimaad ku filan May, aad ku beeri karaa February. Iyo sidoo kale, halkaas oo ay kaliya kulaalaan June, geedka waa in lagu beeray bartamaha Maarso.
Sida loo abuuro petunia on geedo?
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay waa ciid wanaagsan oo nafaqo leh oo leh acidity dhexdhexaad ah, tan iyo geedo ma jecla deegaan acidic aad u badan. Tan iyo xilliga dayrta, waxaad diyaarin kartaa dhulka beerta hore, qoyaanka iyo ciidda qaybo siman, ama qaadashada ciidda oo leh qaab la mid ah iyo heerka loo baahan yahay ee PH. Isla markiiba ka hor beerashada dhulka waa in laga dhigo mid aan la shubin - in lagu dubo foornada ama la dhigo dhowr maalmood oo qaboojiyaha, ka dibna ku siib.
Shinnida Petunia waa mid aad u yar oo aan fududeyn in iyaga beerta. Si loo fududeeyo geeddi-socodka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro ciid wanaagsan, ka dibna geedo way koraan si siman.
Ka hor inta beerto, carrada waxaa lagu meeleeyaa weel kasta oo leh lakabyo bullaac ah oo wanaagsan iyo godadka godka, ka dibna is adkeyn. Ka dib markaa, ciidda ayaa qoyan tahay qoriga buufinta. Inta ugu badan ee suurtagal ah, beereedka waxaa loo fuliyaa si siman ciidda, ka dib markii taas oo dunida lafteeda leh abuurka la qoyan yahay xal daciif ah manganese.
Weelka waa in lagu daboolaa filim hufan ama dhalo oo lagu rakibay maqaarka diiran.
Geedo of petunia ee kiniinnada peat
Kiniiniyada Peat waxay ku habboon yihiin petunia sii kordhaya. Waxay ku jiraan weel waxoogaa saf ah, qoyan biyo iyo caawinta cadayga, mid ka mid ah abuurka dillaacaya ayaa lagu meeleeyaa kiniin kasta si toos ah dusha sare. Daryeel dheeraad ah ayaa la mid ah sida abuurka weelasha. Geedaha kiniinada uma baahna in la duubo, waxaa si toos ah loogu beeri karaa dhulka 12 toddobaad kadib.
Sidee u koraan geedo petunia guriga?
Xayawaanka guryaha loo yaqaan 'petunias' xaaladaha degdegga ah ayaa si deg deg ah u koraya, laakiin waxaad u baahan tahay inaad daawato si aysan u fidin. Ku Tani waa laga hortagi karaa, xitaa calaamadaha ugu horeeya waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo heerkulka anshaxa iyo kordhinta iftiinka. Muraayaddu waxay u baahan tahay in laga saaro oo kaliya marka ay afkoda ka dhacaan jaakad.
Waraabinta caleemaha yar yar waxaa lagu sameeyaa biyo lagu buufiyo, kaas oo la soo saaro maalin kasta. Warshadu waxay jeceshahay qoyaan badan waqtiga koritaanka xooggan. Ka dib marka labada caleemood ee ugu horreeya ee caleemahaasi soo baxaan, koobabka kala duwan ee koobabka ayaa la qabtaa.
Qiyaastii 3 bilood ayaa ka soo baxa caleemaha ugu horreeya si ay u beerto dhirta dhulka. Si petunia loo badbaadiyo beerka, waa lagama maarmaan in ay si joogto ah u soo qaadaan weelasha lagu hagaajinayo wadada.
Tomato "Prince The Black"
Strawberry "Tsarina" - sharaxaad kala duwan
Haweeney Dumar ah
Daffodils - beerashada iyo daryeelka ee dhulka furan
Goorta ay u beerto dhirta xilliga dayrta?
Kala saarista Kalanchoe by gooyn
Dhulka for geedo
Diyaargarowga martigelinta jiilaalka
Noocyo oo ah basbaas macaan oo dhoobo leh oo dhulkoodu furan yahay
Sansevieria - noocyada
Bacriminta Superfosphate - tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka
Jardiino Xulashada adoo dheer
Sidee loo noqdaa xaas wanaagsan?
Diyaarinta geedo tufaaxa jiilaalka
Maxaa ka keenaya Kazakhstan?
Amber Hurd wuxuu taageersaa beelaha laga tirada badan yahay ee kufsiga "shirqoolka iyo barbaarinta"
Daboolka laga sameeyey polycarbonate
Kabaha dareerka leh ee timaha
Pilaf oo ku shaqeeya cunto kariye
Root xidid - sii kordhaya
Faransiiska ciddiyaha - waxyaabaha cusub 2016
Nafaqada kala duwan - maxay tani micnaheedu tahay, mabaadiida iyo xeerarka, sida loo tago?
Dhiig-xuub khafiif ah
Heerka iyo miisaanka Lana Del Rey
Scalaria - dayactirka iyo daryeelka
Sidee loo dhejiyaa waraaqaha derbiga?
Dumarka gabdhaha xagaaga ee dharka
Sharciga mustaqbalka xiriirka lala leeyahay qof la jecel yahay
Cream for calaamadaha fidsan ka dib dhalmada
Xeerarka ciyaarta ciyaarta tennis
Qurxinta qaabka Provence
Salad leh beerka iyo qajaar
Foornada leh microwave function - maxaan u eegi doonaa marka aad soo iibsaneyso?
Cuntada kalluunka quraaradda